विप्लव र प्रचण्ड दुवै गलत सावित भैसके : डा. भट्टराई - samayapost.com
विप्लव र प्रचण्ड दुवै गलत सावित भैसके : डा. भट्टराई
समयपोष्ट २०७५ चैत १ गते १२:५१
नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड र विप्लव दुवैमा वैचारिक समस्या आएको जिकिर गरेका छन् । बाबुरामले एक ट्विट गर्दै दुवैमा देखिएको वैचारिक समस्याले पछिल्लो परिणाम आएकाले ‘कोर्स करेक्सन’गर्न सुझाव दिएका छन् । उनले दुबै जना गलत बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले लेखेका छन्, ‘पूर्व क.प्रचण्ड र विप्लव दुवै गलत बाटोमा हुनुहुन्छ र एकअर्कालाई संगीन आरोप लगाइरहनुभएको छ ! समस्या व्यक्तिको नभएर विचारको हो ! यो दन्तबझान संसदीय कम्युनिज्म र उग्रपन्थी कम्युनिज्म वीचको हो !’
‘इतिहासले दुवैलाई गलत सावित गरिसकेको छ’, अंग्रेजी भनाइ ‘टू रङ डन्ट मेक अ राइट’ स्मरण गराउँदै बाबुरामले लेखेका छन्, ‘खाँचो नयाँ विचारको ।